UHLUKO PHAKATHI KWAMA-304 NO-316 ISITSIMBI ESINGASINAMANDLA | Joyina
Lapho ukhetha insimbi engagqwali okumele ikhuthazelele izindawo ezonakalisayo, izinsimbi ezingenasici ze-austenitic zivame ukusetshenziswa. Njengoba sinemikhiqizo emihle kakhulu, amanani aphezulu we-nickel ne-chromium kuma-austenitic steels angenasici nawo ahlinzeka ngokumelana nokugqwala okuvelele. Ngokwengeziwe, izinsimbi eziningi ezingenazinsimbi ezinama-austenitic zingashisheka futhi zenzeke kahle. Amabanga amabili kulawo asetshenziswa kakhulu ensimbi engagqwali angama-304 no-316. Ukukusiza ukuthi unqume ukuthi iliphi ibanga elilungele iphrojekthi yakho, le bhulogi izobheka umehluko phakathi kwensimbi engagqwali engu-304 no-316.
Insimbi engagqwali yeBanga 304 ngokuvamile ibhekwa njengensimbi engenasici evame kakhulu e-austenitic. Iqukethe okuqukethwe okuphezulu kwe-nickel okujwayelekile phakathi kwamaphesenti ayisishiyagalombili kuya kwayi-10.5 ngesisindo nenani eliphakeme le-chromium cishe ngamaphesenti ayi-18 kuye kwangama-20 ngesisindo. Ezinye izinto ezinkulu zokuhlanganisa izinto zifaka i-manganese, i-silicon, ne-carbon. Okusele kokwakhiwa kwamakhemikhali ngokuyinhloko kuyinsimbi.
Inani eliphakeme le-chromium ne-nickel linikeza insimbi engagqwali engu-304 ukumelana nokugqwala okuhle kakhulu. Izicelo ezijwayelekile zensimbi engagqwali engu-304 zifaka:
Izinto zokusebenza ezifana neziqandisi kanye nemishini yokuwasha izitsha
Imishini yokuthengisa ukudla yokuhweba
Izakhiwo ezindaweni ezizokonakalisa i-carbon steel ejwayelekile.
316 Insimbi Engagqwali
Ngokufana no-304, insimbi engagqwali yeBanga 316 inamanani aphezulu e-chromium ne-nickel. I-316 iqukethe ne-silicon, i-manganese, ne-carbon, iningi lalokho okwakhiwe kuyinsimbi. Umehluko omkhulu phakathi kwensimbi engagqwali engu-304 no-316 ukwakheka kwamakhemikhali, nama-316 aqukethe inani elikhulu le-molybdenum; ngokujwayelekile amaphesenti ama-2 kuye kwayi-3 ngesisindo ngokulinganisa kuphela amanani atholakala ku-304. Okuqukethwe okuphezulu kwe-molybdenum kuphumela ebangeni lama-316 anokwenyuka kokumelana nokugqwala.
Insimbi engagqwali engu-316 ivame ukubhekwa njengenye yezinketho ezifanele kakhulu lapho kukhethwa insimbi engagqwali ye-austenitic yezicelo zasolwandle. Ezinye izinhlelo ezivamile zensimbi engagqwali engu-316 zifaka:
Imishini yokucubungula nokugcina amakhemikhali.
Izindawo zasolwandle, ikakhulukazi lezo ezinama-chloride akhona
Yikuphi Okufanele Ukusebenzise: IBanga 304 noma iBanga 316?
Nazi ezinye zezimo lapho insimbi engagqwali engu-304 kungaba yindlela engcono:
Uhlelo lokusebenza ludinga ukwakheka okuhle kakhulu. Okuqukethwe okuphezulu kwe-molybdenum eBangeni 316 kungaba nemiphumela emibi ekuhleleni.
Isicelo sinenkinga yezindleko. IBanga 304 ngokujwayelekile lithengeka kakhulu kuneBanga 316.
Nazi ezinye zezimo lapho insimbi engagqwali engama-316 kungaba yindlela engcono:
Imvelo ifaka inani eliphezulu lezinto ezonakalisayo.
Okokusebenza kuzobekwa ngaphansi kwamanzi noma kuvezwe amanzi ngokungaguquguquki.
Kuzinhlelo zokusebenza lapho kudingeka khona amandla amakhulu nobulukhuni.